जोन्सन बेबी पाउडर हानीकारक रहेको भारतीय मिडियाको दावी
जोन्सन एन्ड जोन्सनका बालबालिका लक्षित उत्पादनहरू नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय छन् । जसमध्ये एक हो, बेबी पाउडर । तर, हालैको एउटा भारतीय अनलाइनले भने यो बेबी पाउडरमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । जोन्सन एन्ड जोन्सनको बेबी पाउडर क्यान्सरको कारक बन्न सक्ने उक्त अनलाइनको समाचारमा जनाइएको छ । अनलाइनले लेखेको छ, ‘बेबीकेयरका लागि अमेरिकी फर्मा कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनले लामो समयदेखि यस्तो रसायन प्रयोग गरिरहेको छ,...
के तपाइलाई सय वर्ष को जीवन चाहिएको छ?उसो भए गर्नुस यी काम !
‘ब्लू जोन्स’ का लेखक डान ब्यूटनरले संसारका ती पाँच स्थानको अध्ययन गरे जहाँका मानिसहरु लामो जीवन बाँचेका कारण चर्चित छन् । ती हुन् – जापानको ओकिनावा, कोस्टा रिकाको निकोया, ग्रिसको इकारिया, क्यालिफोर्नियाको लोमा लिन्डा र इटलीका सर्डिनिया । यसका बासिन्दामा केही कुरा समान देखिए जस्तै सामाजिक सुरक्षा तन्त्र, दैनिकको व्यायाम र शाकाहार । यीमध्ये अर्को एउटा कुरा समान देखियो । यी सबै समूदायका मानिसहरु बुढेसकालसम्म खेतीपाती गर्छन्...
जीवनभर स्वस्थ र खुशी रहने उपाय यस्ता छन्
स्वस्थ जीवन को चाहँदैन ? को चाहन्छ बारम्बार बिरामी भएर अस्पतालमा लड्न ? तर, हाम्रो त्रुटीपूर्ण जीवनशैली र खानपानले गर्दा चाहेर पनि स्वस्थ जीवन बाँच्न सकिरहेका छैनौं । स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नियमित स्वस्थकर खानाका साथै व्यायाम र सरसफाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यस्तै, फेक डाइटिङ र अपर्याप्त निद्राबाट बच्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामी यहाँ केही टिप्सहरु दिँदैछौं, जसले तपाईंलाई स्वस्थ जीवन हासिल...
थाइराइडका बिरामीले अपनाउनुहोस यी उपाय
थाइराइडको समस्या अहिले तीव्ररुपमा फैलिइरहेको छ । झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि यो निकै दुख दिने रोग हो, जसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भनिन्छ । के हो त थाइराइड ? कसरी उत्पन्न हुन्छ यसमा समस्या ? सबैले बुझ्नु जरुरी छ । खासमा थाइराइड हाम्रो घााटीभित्रको एक ग्रन्थी हो, जसले विशेष प्रकारको हार्मोन उत्पादन गर्छ । यो ग्रन्थीले सही ढंगले काम गर्न सकेन भने आवश्यकाभन्दा बढी वा कम...
यस्ता लक्षण भए होसियार हुनुहोस,मिर्गौला सुन्निएको हुनसक्छ
आजभोली धेरै मानिसहरु मिर्गौलासम्वन्धी रोगको शिकार भइरहेका छन् । त्यसमध्ये मिर्गौला सुन्निने समस्या पनि एउटा हो । मिर्गौला हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंगमध्ये पर्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, मानव शरीरमा दुईवटा मिर्गौला हुन्छन् । एउटा बाँयातर्फ हुन्छ भने अर्को दाँया तर्फ । मिर्गौलाको प्रमुख काम रगतबाट विकारयुक्त पदार्थ र अतिरिक्त तरल पदार्थ छानेर शरीरबाट बाहिर निकाल्नु हो । गलत खानपान, उच्च रक्तचाप, महुमेह आदिको कारणले...
मुटुको हेरचाह कसरि गर्ने ?हृदयघात जो कोहि लाइ हुन सक्ने ,
स्वस्थ रहने भन्नासाथ हामी शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने र मोटोपना घटाउने कुरा मात्रै गर्छौं । तर, स्वस्थ, जवान र चुस्त रहनको लागि मोटोपना घटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन पक्कै पनि । हाम्रो शरीरका भित्री अंगहरुको हिफाजत पनि उत्तिकै आवश्यक छ । शरीरभित्रको अति महत्वपूर्ण एक अंग हो मुटु । शरीरका प्रत्येक अंगमा आवश्यक रगतको आपूर्ति गर्ने काम यसले गर्छ त्यसैले यसलाई स्वस्थ राख्न आवश्यक छ । तर,...
कम उमेरमै स्मरणशक्ति ह्रास हुनुका कारण के के हुन् त ?
मानव जीवनमा स्मरणशक्तिको ठूलो महत्व छ । स्मरणशक्ति तेज भएका मानिसहरुले हरेक क्षेत्रमा चाँडो प्रगति गर्न सक्छन् । कमजोर हुनेहरु पछि पर्छन् । त्यसो त मानिसहरुको जन्मजात स्मरण क्षमतामा खासै अन्तराल हुँदैन । करिव-करिव उस्तै हुने हो । तर, बाँच्ने क्रममा कसैले त्यसलाई तिखारेर तेज बनाउँछन् भने कसैले भुत्ते बनाउँदै लैजान्छन् । यो आफैंमा भर पर्ने कुरा हो ।वैज्ञानिकहरुका अनुसार व्यक्तिको स्मरण शक्तिको गहिरो सम्बन्ध...
जाडो याममा छालाको हेरचाह कसरि गर्ने ?
जाडो याम सुरु भए संगै स्वास्थमा विभिन्न प्रकारका समस्या हरु आउने गर्छन जाडो याममा स्वास्थ संगसंगै छाला सम्बन्धि समस्या धेरै आउने गरेको पाइन्छ । गर्मि यामको तुलनामा जाडो याममा छाला बढी सुक्खा हुने भएका ले खासगरी अनुहारको छाला फुट्नु, फुस्रो हुनु जस्ता समस्याबाट धेरै मानिस ग्रस्त हुन्छन् ।यस्तो अवस्थामा कतिपयले विभिन्न प्रकारका केमिकल युक्त क्रिम प्रयोग गर्दछन् । तर घरमै यसको उपचार र हेरचाह...
स्क्रीनमा बढी समय बिताउने बच्चाको मस्तिष्कमा पर्छन् यस्ता नकरात्मक प्रभाव
वासिङ्टन । अनुसन्धाताहरुले प्रारम्भिक तथ्याँकहरुको विश्लेषणबाट मोबाइलजस्ता स्मार्ट उपकरणको बढी प्रयोग गर्ने तथा भिडियो खेलमा बढी समय बिताउने बालबच्चाको मस्तिष्कमा ‘भिन्न संरचना’ भेटिएको बताएका छन् । आधुनिक यस्ता उपकरणबाट बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभावका बारेमा हाल संयुक्तराज्य अमेरिकामा गहन अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य इन्स्टिच्यूट (एनआईएच) को प्रारम्भिक अध्ययनमा दिनमा सात घण्टाभन्दा बढी समय मोबाइल चलाउने र भिडियो खेल खेल्ने नौ र दश वर्ष उमेरका...
जाडोमा बाँसको तामा खानुहोस यस्ता फाइदा हुन्छ :
बाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार । हुन त अहिले यसको सिजन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार निकै उपयोगी हुन्छ । बाँसको तामा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसलाई अचार, तरकारी वा सुपको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियामा बाँसको तामाको प्रचलन छ । नेपालमा यसको परिकार सिमित भए पनि विदेशमा भने सैयौं परिकारमा यसको प्रयोग गरिन्छ ।...